Kala badh Shirkadaha Cod Bixiyay waxay leeyihiin Bog + Google+ | Martech Zone
Kala badh Shirkadaha Cod Bixiyey waxay leeyihiin Bog + Google+
Sabti, Febraayo 18, 2012 Douglas Karr
Waxaan ku orodnay a Codbixinta Zoomerang dhinacayaga usbuucyadii la soo dhaafay si loo helo sawir cad oo ku saabsan inta shirkadood ee qaatay bogga Google+. Natiijooyinka codbixinta waxay ahaayeen kala qeybsanaan fiican… kaliya 50% aqristayaasha ayaa sheegay in shirkadooda ay leedahay bog Google+. In kasta oo ay taasi u muuqan karto mid hoose, haddana waxaan u maleynayaa in tirooyinka dhabta ahi ay aad uga hooseeyaan. Waxaan yara yara rajo xumaa in dad badani haysteen.
Markii aan raadineynay tartamayaasha macaamiisheenna, inta badan kama heli karno Google+ taasna waa mid ka mid ah sababaha aan ugu dhiirrigelinnay inay halkaas joogaan. Waa kan tusaale mid ka mid ah macaamiisheenna, Lifeline, oo leh xarunta ugu weyn ee xogta bartamaha galbeed. VP-ga iibintoodu waxay soo bandhigayeen waxyaabaha caadiga ah waxayna soo jiidanayeen raacis wanaagsan.
Waaya aragnimadeena ayaa ina tustay in korsashada hore ay horseedday koboc dhaqso leh markay tahay warbaahinta bulshada. Maaha qasab inaad adigu maanta ku guuleysan doontid dagaalka if laakiin haddii iyo goorta uu boggaga bulshada ka baxo, korsashadaadii hore waxay kaa dhigtay hoggaamiye halkaas. Gudaha Google+, markaan raadinayo xarumaha xogta, waxaa jira natiijooyin kooban. Midka hore waa Lifeline, kan ku xiga waa shirkad dhisme datacenter ah, kan ugu dambeeyana waa shirkadda Canadian Data Center.
Taasi waa war weyn oo u ah Doug iyo kooxdiisii ​​Lifeline. Waxaa jira malaayiin isticmaaleyaal ah oo ku jira Google+ iyada oo qaar badan oo ka mid ah ay dhisayaan shabakadooda. Maaddaama uusan jirin wax tartan ah, Doug wuxuu soo qaban karaa qaar ka mid ah taageerayaashii hore ee laga yaabo inuusan horay u soo gaarin oo calankiisa ku dhejiyo dhulka isagoo ah feker horay u socda, khabiir ku xeel dheer Xarunta Xogta. Tani waa tallaabo istiraatiiji ah oo si toos ah ugu hagaajin karta Nidaamka Nolosha ee warshadaha, qasab maahan xeelad dib-u-soo-celin degdeg ah ku leh maalgashiga.
Ma baartey tartankaaga Google+? Miyay tartamayaashu durbaba dhisayaan dukaan iyo awood ay ku dhisaan shabakaddan bulsheed ee leh koritaan xoog leh oo laga yaabo in maalin uun ay Facebook lacag ku bixiso? Waa inaad xusuusataa inaysan ku saabsanayn aad, waxay ku saabsan tahay halka dhagaystayaashaadu joogaan. Doug wuxuu ka helay qaar ka mid ah dhagaystayaashiisa Google+. Waa inaad ka fikirtaa inaad ka hesho halkaada, sidoo kale!
Tags: googlegoogle daraygoogle plus pagegoogle +
Waa maxay AuthorRank iyo Maxay muhiim u tahay